गरिमा पन्त : रिलमा शालिन, रियलमा से’क्सी ! – ईमेची डटकम
Posted byइमेची संवाददाता September 30, 2019 October 1, 2019 Leaveacomment on गरिमा पन्त : रिलमा शालिन, रियलमा से’क्सी !
काठमाडौं । कतिपय अभिनेत्री रिल जीवनमा से’क्सी देखिने र रियल जीवनमा सामान्य हुन्छन् । रिलमा कथाले मागेपछि दृश्य दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क रहन्छ ।
तर ठिक उल्टो । रिल जीवनमा शालिन देखिने अभिनेत्री गरिमा पन्त भने रियल जीवनमा ‘से’क्सी’ र विन्दाम मुडमा युरोप भ्रमणमा छिन् ।
पछिल्लो पटक चलचित्र झोलाबाट अत्याधिक चर्चामा आएकी गरिमा अब सिनेमा क्षेत्रमा फर्कन्छीन वा फर्किनन् ? त्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
नेपाली फिल्मकी सुन्दर र भलाद्मी नायिकाको रुपमा चिनिने गरिमा पन्त बेल्जियम बस्न थालेको झण्डै एक बर्ष बढी भैसकेको छ । ‘झोला’ बाहेकका अन्य फिल्महरुले करिअर चम्काउनुको साट्टो झन फुर्सद बनाउन थालेपछि उनले बेल्जियमका धनाड्य नेपाली यूवक हरि शर्मासँग विवाह गरिन् । गरिमा हरि शर्माकी दोस्रो श्रीमती हुन् ।
Posted byइमेची संवाददाता September 30, 2019 October 1, 2019 Posted inमनोरञ्जन